Waa’ee Itiyoophiyaa Cheek dhimmoota kunneen beektuu? – ኢትዮጵያ ቼክ
Waa’ee Itiyoophiyaa Cheek dhimmoota kunneen beektuu?
Itiyoophiyaa Cheek Hagayya bara 2012 projektii dhaabbata Intarniwus (Internews) ta’uun hundeeffame.
Kaayyoon Itiyoophiyaa Cheek Itiyoophiyaa keessatti tumsa facaatii odeeffannoo sobaa ittisuuf taasifamu deeggaruudha.
Dhaabbatichi hojii odeeffannoowwan mirkaneessuu (fact checking) kan hojjetu yemmuu ta’u odeeffannoowwan gama miidiyaalee hawaasummaafi miidiyaalee birootin tamsa’an mirkaneessuun dubbistootaaf dhiyeessa.
Itiyoophiyaa Cheek odeeffannoowwan mirkanaa’an kunneen toorawwan miidiyaa hawaasummaa isaarratti maxxansuun dabalataan ji’atti si’a lama miidiyaaleefi gaazexeesitootaaf bifa barruutin (newsletter) ni erga.
Kana malees Itiyoophiyaa Cheek leenjiwwan garagaraa kan kennu yemmuu ta’u leenjichi gaazexeessitootafi namoota hojii odeeffannoo mirkaneessuu (fact checking) hojjetanif kennama.
Dabalataan Itiyoophiyaa Cheek torbee torbeen guyyaa Wiixataa akkaataa odeeffannoowwan sobaa adda baasuufi beekun itti danda’amu, waa’ee marsariitiiwwanfi moosaajiiwwan odeeffannoowwan mirkaneessuf gargaaran akkasumas dhimmoota walqabatan irratti barreeffamoota qopheessuun nimaxxansa.
Odeeffannoo dabalataaf fuula Feesbuukiifi marsariitii keenya daawwadhaa.